Saturday February 08, 2020 - 11:25:29 in Wararka by
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya iska hor'imaad khasaara dhaliyay oo maanta degmada Beled Xaawo ku dhaxmaray maleeshiyaad kala taabacsan dowladda Farmaajo iyo maleeshiyaad daacad u ah maamulka Axmed Madoobe.
Ugu yaraan hal qof oo kamid ah dhinacyadii dagaallamay ayaa dhintay kadib markii iska hor'imaad xooggan uu maanta barqadii ka qarxay gudaha magaalada, goob joogayaal ayaa sheegay in qofka dhintay uu kamid ahaa ciidamadii taabacsanaa Cabdi Rashiid Janan.
Ciidamada dowladda Federaalka waxaa ka dhaawacmay illaa 2 askari waxaana la sheegay in mid kamida askarta dhaawacmay xaaladdiisa caafimaad ay liidato.
Wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in xaaladda Beled Xaawo deggantahay waxaana ku sugan ciidamada dowladda Farmaajo halka maleeshiyaadkii daacadka u ahaa Maxamuud Sayid Aadan iyo Cabdi Rashiid Janan ay dib ugu laabteen dhanka xuduud beenaadka.
Colaadda udhaxaysa dowladda Federaalka iyo maamulka 'Jubbaland' ayaa laga dareemayaa inta badan deegaannada xuduud beenaadka ku teedsan, illaa iyo haddana wax war ah kamasoo bixin dhinacyada dagaallamaya.